Stockholmteenna 2017 - stockholm.se
Du är här: Startsidan / Om Stockholm / Budget / Vårt Stockholm 2017 / Stockholmteenna 2017
Stockholm si dhakhsi ah ayey u kobceysaa. Sannadka 2040 waxaa la qiyaasayaa in aannu noqonno ku dhawaan 1,3 milyan oo stockholm deggan. Kororka degdegga ah ee dadweynuhu wuxuu u baahanyahay qorshe dheer iyo sawir ulajeeddo oo waafaqsan hiigsiga magaalada ee Stockholm dhammaan loo wada simanyahay.
Dhammaan dadka deggan stockholm waa in ay isku si fursado ay noloshooda ku dhistaan ugu helaan. Nasiib daro sidaas maaha maata. Waannu ognahay in magaaladeenna uu farqi weyn dadka u dhexeeyo. Waxaa sidaas darteed dadaallo badan la gelinyaa dugsiyada, dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta, deegaanno dhisid iyo qaabilaadda dadka waddanka ku cusub. Dhammaan dadka deggan stockholm waa in ay isku fursado ugu helaan nolol qiimo leh.
Waxaad haysataa faylka ”Stockholmteenna 2017” oo loo qeybiyo dhammaan guryaha Stockholm. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa sida lacagtaada canshuurta loo isticmaalayo iyo sida magaaladu ay wax ugu qabaneyso si ay magaaladu u kobacdo, u horuumarto, una waajahdo taxaddiyada mustaqbalka.
Waxaa jira waxbadan oo laga ogaan karo magaalada. Faylka waxaa laysugu laabi karaa si khariiddad noqoneysa oo muuqaal guud ka bixineysa sida ay degmada Stockholm u muuqato, meelaha dabiicada loo qoondeeyay, hoolalka dabaasha- iyo isboortiga, meelaha dabaasha, maktabadaha, mashaariicda dhismada iyo rugaha dhaqanka ee laga qeyb qaadan karo.
Qoraalkan (af-Soomaali, PDF)
Khariidad (af-Soomaali, PDF)
Kontakt gällande Stockholmteenna 2017